Seams बीचको समय, Sira Quiroga को जीवन्त जीवन वर्तमान साहित्य
Seams बीचको समय
Seams बीचको समय (२००)) स्पेनिश लेखक मारिया ड्युडासको उपन्यास हो। यो सिरा क्विरोगाको जीवन्त जीवनको बारेमा धेरै राम्ररी वर्णन गरिएको कथा हो जुन युवा पोशाक निर्माता जसले गृहयुद्धको केही महिना अघि म्याड्रिड छोडेकी थिइन। यसैबीच, पाठकका लागि, स्पेन र युरोपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रस to्गमा लेखकको दृष्टिकोण प्रकट भइरहेको छ।
यस कारणले गर्दा यस पुस्तकको गवाहीको रूपमा एक निर्विवाद महत्त्व छ (पुरानो पुरानो प्रसंगबाट बाहिर)। समग्रमा, प्रेम र दु: खको कथानक, साथ सँगै धनी र चाखलाग्दो अनुक्रम मार्फत त्यस समयको वास्तविकताको वर्णन, यसलाई बनाउनुहोस् नयाँ सहस्राब्दीको स्पेनी भाषामा लेखिएको सबैभन्दा उल्लेखनीय कार्यहरू मध्ये एक।
1 Seams बीचको समय सारांश
1.1 प्रारम्भिक दृष्टिकोण
2 Seams बीचको समयमा विश्लेषण
2.1 एक धेरै प्रामाणिक ऐतिहासिक उपन्यास
2.2 उपन्यासमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु
2.3 टेलिभिजन अनुकूलनहरू
2.3.1 एक फ्रान्चाइजी को शुरुआत?
3 लेखकको बारेमा, मारिया ड्यूडास
3.1 Seams बीचको समयको प्रभाव
3.2 मारिया डाउडेसका अन्य पुस्तकहरू
सारांश Seams बीचको समय
सिरा क्विरोगा एक युवा र आकर्षक पोशाक निर्माता हुन् जसले आफ्नो बुवाबाट महत्त्वपूर्ण उत्तराधिकार प्राप्त गर्छिन्, जो जोडदार स्पेन भाग्न सिफारिश गर्दछ। S० को पास, गृहयुद्धको पूर्ववर्ती मा, सीरा वातावरण मा हिंसा महसुस गर्न सक्छन्। थप रूपमा, ती युवती पागलपनले रामिरोको प्रेममा परिणत हुन्छन्, यद्यपि उनी मोरक्कोको राजधानी बसाइँ सर्ने निर्णय गर्दछन्।
उल्लेखित कारणहरूको लागि, युवती आफ्नो प्रियको मार्ग अनुसरण गरेर Tangier जान्छ। यद्यपि तिनीहरूको गणनाले रामिरोको पक्षमा उपदेश, छल र दुष्ट देखा परेन। फलस्वरूप, सीराले आफूलाई उत्तर पश्चिमी अफ्रिकामा परित्याग गरे र यस कुख्यात व्यक्तिले लुटेर लगे (साथै debtणमा)।
Seams बीचको समय ...
सिरा कठोर परिस्थितिको बावजुद पार गर्न सफल भएकी छिन्; ऊ बाँच्नको लागि एक ड्रेसमेकरको रूपमा आफ्नो व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय गर्दछ, र फेरि प्रेममा पनि पर्दछ। त्यो बाटोमा, उनी उनी धेरै ग्राहकहरुसँग मित्रता राख्छिन्… ती नयाँ मित्रता राजनीतिसँग सम्बन्धित छ जसको युद्धको जस्तो ठूलो परिमाणको प्रस context्गको बीचमा घटनाहरूको क्रान्तिकारी मोड आउँछ।
पछि, Sira Quiroga सहयोगी सेनाहरूको लागि जासूसीको रूपमा सेवा गर्ने निर्णय गर्दछ र दोस्रो विश्वयुद्धको घटनाहरूमा उल्लेखनीय रूपमा भाग लिन्छ। यद्यपि कथाको अन्त्यमा यो स्पष्ट हुन्छ कि नायक केवल शान्तिमा बस्न चाहन्छ, धेरै अशान्ति उनको गन्तव्यमा पर्खिरहेकी छे। यद्यपि यी घटनाहरूको वर्णन गरिएको छ Sira, को दोस्रो भाग Seams बीचको समय (अप्रिल २०२१ मा जारी गरियो)
विश्लेषण खुल्ला छ Seams बीचको समय
एक धेरै प्रामाणिक ऐतिहासिक उपन्यास
यस पुस्तकमा, लेखक विचार गर्दछन् एक महत्वाकांक्षी साहित्यिक परियोजना, अनुमानित ऐतिहासिक संदर्भहरूमा हल्का गणना गर्न असम्भव। फलस्वरूप, स्पेनमा १ 30 .० को दशकमा भएका वास्तविक पात्रहरू र घटनाहरूको समावेश कथामा आवश्यक छ।
यो बाहेक मुख्य पात्रको अनुभवहरू, Dñasas कुशलतापूर्वक दोस्रो विश्व युद्ध को प्रस explains्ग वर्णन गर्दछ। यसका लागि लेखकले वर्णन र सन्दर्भहरूको प्रयोग गरे जुन मानवजातिको इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युद्ध द्वन्द्वको बारेमा उनको दृष्टिकोण देखाउँदछ। जहाँ उद्देश्य भनेको युद्धको त्रासदीलाई पाठकको स्मृतिमा राख्नु हो।
उपन्यासमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु
स्पष्ट छ, जब एक ऐतिहासिक उपन्यास सामना गर्नुपर्दा, घटनाको कथन गरिएको प्रस context्गमा महत्वपूर्ण प्रासंगिकता प्रदान गर्न असम्भव छ। तसर्थ, Seams बीचको समय पाठकले सिरा क्विरोगाको जीवनलाई पछ्याउँदछ, जबकि युद्धको अनुहार देखाउँदै। अर्को शब्दहरुमा, मानव अवस्था मा युद्ध को विषय पूरी कहानी को माध्यम बाट चलाउँछ।
त्यसबाहेक, मुख्य पात्र - कोड नाम एरिश अगोरियक अन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्धको बेला अ English्ग्रेजी जासुसीमा एक मुख्य खेलाडी बन्छ। समानान्तरमा, युद्धका जटिल रणनीतिक पक्षहरू अवस्थित छन् जुन अपरिहार्य प्रकोपबाट पर जान्छ। थप रूपमा, स्पेनिश गृहयुद्धको दृष्टिकोणले द्वन्द्वका कारण सामाजिक वातावरण कसरी भयो भनेर वर्णन गर्दछ।
उत्कृष्ट सार्वजनिक स्वीकृति प्लस अनुकूल समीक्षाको ब्यारेजले नेतृत्व गर्‍यो Seams बीचको समय सानो पर्दामा ल्याइएको थियो। यो कारणले, २०१ In मा, टेलिभिजन स्टेशन एन्टेना ले उही नामको श्रृंखला रेकर्ड गर्यो जुन अहिले सम्म १ ep एपिसोडहरू चलिसक्यो। र धेरै पुरस्कार स .्कलन गरेको छ।
साथै, यस श्रृंखलामा एक अन्तर्राष्ट्रिय कास्ट छ जसको नेतृत्व एड्रियाना उगार्टे को कदका कलाकार छन्, पीटर भभेस र हन्ना न्यू, अन्य। श्रृंखला को प्रत्येक एपिसोड को लागी औसत सेटिंग्स र पोशाक को कारण आधा मिलियन यूरो को औसत बजेट आवश्यक छ।
एक फ्रान्चाइजी को शुरुआत?
जे भए पनि, यो पैसा एकदमै राम्रोसँग खर्च भएको छ, किनकि पहिलो सीजनको दर्शक स्तरहरू कहिल्यै ११% भन्दा तल झर्दैनन्। समावेशी, एघारौं एपिसोड, "फिर्ता कल हिजो", करीव .5,5 लाख दर्शकहरूले देखेका थिए (२.27,8..20% जनवरी २०, २०१ on मा ट्यून गरियो)।
अन्ततः, को सुरूवातको साथ Sira (२०२१) मारिया ड्युडासले सिरा क्विरोगा अभिनित अधिक डेलिभरीहरूको ढोका खोलिदिएको छ - अरिश Agoriuq। सानो पर्दामा लोकप्रियता र व्यावसायिक संख्याहरू प्राप्त गर्दै, स्प्यानिश भाषा बोल्ने दर्शकहरू यदि श्रृंखलाका नयाँ एपिसोडहरू देखा पर्दछन् भने अचम्म मान्दैनन्।
लेखकको बारेमा, मारिया ड्यूडास
उनी एक स्पेनिश शिक्षिका र लेखिका हुन् जसले १ 1964 .XNUMX मा स्पेनको सियुदाड रियल प्रान्तमा पोर्टोलानोमा जन्मेकी थिइन। तपाईंको साहित्यिक क्यारियर सुरु गर्नु अघि, मालिकहरू उनले मर्सिया विश्वविद्यालयमा बीस भन्दा बढी वर्ष अध्यापनमा शैक्षिक जीवन गरे। त्यस्तै प्योर्टो रिकन महिलाको अंग्रेजी फिलोलोजीमा डक्टरेट छ र उनले इबेरियन राष्ट्रमा सांस्कृतिक र अनुसन्धान गतिविधिको अत्यधिक मान्यता लिएकी छ।
हाल, मारिया दुडियास कार्टाजेनामा बस्छिन्, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग विवाह गरी र उनका दुई बच्चा छन्। समानान्तरमा, २०० in मा उनको पहिलो उपन्यास को प्रकाशन संगै आयो बौद्धिक गतिविधि प्रकाश पार्छ: Seams बीचको समय। यस कारणले, यो यूरोप र बाँकी विश्वको भागमा प्रसिद्ध भयो।
को प्रभाव Seams बीचको समय
यो उपन्यास यो सब भन्दा बेच्ने प्रकाशन भयो, करीव forty० भाषाहरूमा अनुवाद गरियो र एन्टेना channel च्यानल द्वारा टेलिभिजन श्रृंखलामा परिणत भयो। त्यस्तै प्रकारले, यस शीर्षकलाई धन्यवाद कारणले धेरै सजावटहरू पायो। ती मध्ये, ऐतिहासिक उपन्यास (२०१०) को लागि शहर को कार्टेजेना पुरस्कार र म्याड्रिड शहरको संस्कृति पुरस्कार २०११ (साहित्य श्रेणी)।
बाह्र बर्ष प्रकाशित भएको पछि, Seams बीचको समय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा five० लाख भन्दा बढी बिक्री जम्मा गर्दछ। तर, मानौं यो पर्याप्त छैन, उपन्यास कम्तिमा सत्तरी पटक यूरोप भर मा प्रकाशित भएको छ र विश्वमा अन्य ठाउँहरू।
मारिया डाउडेसका अन्य पुस्तकहरू
लोकप्रियता Seams बीचको समय उनको अर्को लिखित प्रकाशनहरू प्रमोट गर्न स्पेनिश लेखकले प्रयोग गर्‍यो। अधिक, निस्सन्देह, मिसन बिर्सनुहोस् (2012), तापमान (2015) र क्याप्टेनका छोरीहरू (2018)उनीहरूको आफ्नै खास आकर्षण छ र राम्ररी रचना गरिएको छ। वास्तबमा, मिसन बिर्सनुहोस् y तापमान ती टेलिभिजनका लागि पनि अनुकूलित गरिएका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » Seams बीचको समय
गोहीहरूको पहेंलो आँखा